कुन तेल सबैभन्दा राम्रो ? « Canada Nepal
काठमाडौँ– मुटु स्वस्थ्य राख्न तेलेको छनौट महत्वपुर्ण मानिन्छ । बजारमा आएका थरीथरीका आआफ्नै दाबाबीच उपभोक्ता झुक्किनु स्वभाविक हो । तर कस्तो तेललाई सहि वा गलत मान्ने त ?
करीब २ दशक अघिसम्म प्राय भान्सामा तोरीको तेल मात्र पाइन्थ्यो । तर अहिले तोरी बाहेक भटमास, सुर्यमूखी, मकै, बदाम, ओलिभसम्मका धेरै थरीका खाने तेल विक्रिमा छन् । मुटु बलियो पार्ने, हर्ट अट्याक हुनबाट जोगाउने र कोलेस्टेरोल फ्रि भनेर बिभिन्न तेलको बजारमा बिक्रि छ्याप्पछ्याप्ती छ ।
तेलमा ३ प्रकारका फ्याटी एसिड पाइन्छ । स्याचूरेटेड, मोनोअनस्याचुरेटेड र पोलि अनस्याचुरेटेड । स्याचुरेटेड फ्याटी एसिडले मुटुलाई हानी गर्दछ भने अनस्याचूरेटेडले केही मात्रामा फाइदा पनि गर्छ । मोनो र पोली अनस्याचूरेटेड फ्याटी एसिडले रगतमा कोलेस्टेरोलको मात्रालाई घटाउन मद्दत पु¥याउँछ ।
यस्ता लाभदायी तत्व कुनै तेलमा बढी त कुनैमा घटी हुन्छ । यसबाहेक तेलमा पाइने माट्ईग्लिसेराइडले कोलेस्टेरोलको उत्पादन बढाउने र मुटुमा नकारात्मक असर पार्ने गर्दछ । तर सूर्यमूखी तेलमा भने कोलेस्टेरोल फ्रि लेखिएर यसका अन्य नकारात्मक कुरा लुकाइएको हुन्छ ।
वनस्पति तेलमा कोलेस्टेरोल पाइदैन । कोलेस्टेरोल जन्तुबाट उत्पादन हुने चिल्लो पदार्थ र घ्यू, मख्खन आदीमा मात्र पाइन्छ । सूर्यमूखी वा अन्य वनस्पती तेलमा कोलेस्टेरोल पाइदैन तर फ्याटी एसिड भने प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यस्तै चिल्लो पदार्थलाई धेरैपल्ट तताउँदा त्यसमा ट्रान्सफ्याट उत्पन्न हुन्छ ।
ट्रान्स फ्याट स्वास्थ्यका लागि धेरै हानीकारक छ । यसै कारण डिप फ्राई गरेर पकाएका परिकारहरु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ । यसबाट मुटुरोग, क्यान्सर हुन सक्छ । त्यसैले चिल्लो खाद्य पदार्थमध्ये घिउभन्दा तेल वेस र तेलहरुमा शुद्ध तोरीको तेल सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ । तोरीको तेलमा गुणकारी तत्वहरु अरुमा भन्दा धेरै मात्रामा पाइन्छ । यो तेल धेरेपल्ट तताउदा पनि ट्रान्सफ्याटमा परिवर्तन हुँदैन ।
प्रकाशित मिति : जेठ १२, २०७९ बिहीबार ७ : १३ बजे